Toro lalana haingana hanidina miaraka amin'ny ankizy amin'izay alehanao | Vaovao momba ny dia
Maria | | fiaramanidina, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Sary | Sambatra Gray Lucky Lucky
Ny dia mitety fianakaviana dia traikefa tsy hay hadinoina sy mahafa-po, fa ho an'ny ray aman-dreny maro ny fikarakarana ny dia tsy mora izany. Betsaka ny lafin-javatra tsy maintsy raisina: ny famandrihana tapakila, fitondrana antontan-taratasy, sakafo, seza ary fiarovana ...
Raha sendra izany toe-javatra izany ianao, amin'ny lahatsoratra manaraka dia hiresaka momba ny fomba tsara indrindra hitetezana ankizy miaraka amin'ny fiaramanidina iray izahay. Aza adino izany!
1 Ohatrinona no tokony aloan'ny ankizy hanidina?
2 Inona ny seza mety indrindra amin'ny zaza?
3 Inona no tsy maintsy antontan-taratasy handefasan'ny ankizy?
4 Afaka mandeha fiaramanidina irery ve ny ankizy?
5 Ahoana ny fomba hahatonga ny dia hahafinaritra kokoa?
6 Inona no entina hampiononana anao?
7 Ahoana no hikarakarana ny sakafonao mandritra ny sidina?
Ohatrinona no tokony aloan'ny ankizy hanidina?
Ny zaza latsaky ny roa taona, izay mila mandeha eo am-pofoan'ny ray aman-dreniny, dia mandoa tapakilan-jaza mihena amin'ny vidiny nefa tsy mahazo toerana. Ity safidy ity dia mety ekena amin'ny sidina fohy fa amin'ny sidina lavitra, tsara kokoa ny mividy tapakila feno fiaramanidina manararaotra ny fihenam-bidy ho an'ny ankizy latsaky ny 12 taona (eo anelanelan'ny 50% sy 75%) ary amin'izany dia mahazo aina sy milamina kokoa ianao. .
Na izany aza, misy kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sasany manome seza misy seza manokana mihitsy aza mba hahafahan'ny ankizy mandeha lavitra kokoa, satria tsy avela mitondra seza na seza an-tsokosoko ao anaty tranony ny sasany ka mila zahana izany.
Amin'ny sidina iraisampirenena, matetika ny zotram-piaramanidina dia manome fandrian-jaza ho an'ny ankizy hatramin'ny roa taona raha toa ka angatahina amin'ny fotoana anaovana famandrihana.
Sary | Fitaratra
Inona ny seza mety indrindra amin'ny zaza?
Tena tsy milamina ny ankizy ary mila toerana malalaka. Raha zokinao mihoatra ny roa taona ianao, ny mety indrindra dia ny miaro seza amin'ny laharana voalohany satria azo ampiharina kokoa ny miditra sy mivoaka ny fiaramanidina ary malalaka kokoa koa io. Na izany aza, tsy maintsy tadidintsika fa ireo toerana ireo matetika dia iharan'ny vidiny lafo kokoa. Na ahoana na ahoana, araka izay azo atao dia tsara ny mangataka seza am-baravarankely na afovoany ho an'ny ankizy ka hialana amin'ny làlana satria tsy miova ny fihetsiky ny mpandeha mandritra ny dia ary amin'ny fomba toy izany dia hialantsika ny fanahiany bebe kokoa noho ny mahazatra.
Inona no tsy maintsy antontan-taratasy handefasan'ny ankizy?
Ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny fitsipiny momba ny antontan-taratasy momba ny zaza tsy ampy taona, noho izany dia tsara ny manangona fampahalalana bebe kokoa amin'io lafiny io miankina amin'ny toerana halehan'ny dia. Ohatra, Raha ny Vondrona eropeana dia ilaina ny manana pasipaoro na ID hahafahany manidina na firy taona izy ireo. Ireo antontan-taratasy ireo dia tsy maintsy aseho amin'ny fotoana fakana vola eo imason'ny ray aman-dreny na amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana an-tsoratra ny iray amin'izy ireo raha tsy eo izy ireo.
Ho setrin'izany, ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sasany dia mety mametraka ny takiny manokana na mangataka antontan-taratasy bebe kokoa. Alohan'ny hanaovana ny famandrihana dia tsy maintsy ampahafantarintsika tsara ny tenantsika manokana momba ny fitsipika manokana momba ny zotram-piaramanidina izay halehanao.
Sary | HuffPost
Afaka mandeha fiaramanidina irery ve ny ankizy?
Ny ankizy eo anelanelan'ny 5 sy 11 taona dia afaka mandeha amin'ny fiaramanidina irery raha toa ka manome serivisy mpanaraka ho an'ny zaza tsy ampy taona ny zotram-piaramanidina ary voamarina izany rehefa mividy ny tapakila.
Rehefa nifanekena tamin'ity serivisy ity izy, rehefa tonga tao amin'ny seranam-piaramanidina ilay zaza tsy ampy taona, dia horaisin'olona avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao amin'ny birao fisavana izy ary hijanona miaraka aminy mandra-piakarana sy fidirana amin'ny sidina manaraka, izay hanolorana ilay zaza ho an'ny mpiasa kabine ka hikarakara izany mandritra ny sidina.
Amin'ireny tranga ireny dia mazàna ny zaza tsy ampy taona dia mivezivezy mitondra kitapo kely iray eo amin'ny vozony izay milaza ny UM (Mpifanaraka tsy ampy taona), izay hitazomana ny tapakilany sy ny antontan-taratasiny manokana. Eny an-dàlana, hanome anao fitsaboana manokana ny mpiasa ao amin'ny kabine mandra-pahatongan'ny fipetrahana. Ny mpiasa ao amin'ny orinasa dia hanara-maso anao amin'ny fotoana rehetra, na mandrapahatonga sidina mampifandray iray hafa na mandra-pahatongan'ny mpianakavinao raha tapitra ny dia.
Ny ankizy izay tsy miaraka amin'ny olon-dehibe dia afaka miditra na mivoaka ny firenena miaraka amin'ny alalana an-tsoratra. Ny antontan-taratasy voalaza dia tsy maintsy ahitana ny datin'ny dia, ny sonian'ny ray aman-dreniny na ny mpiambina azy ary homena mari-pahaizana.
Na izany aza, mihamaro hatrany ireo kaompaniam-piaramanidina nanafoana an'ity serivisy ity na tsy mamela mivantana ireo zaza tsy ampy taona latsaky ny 16 taona tsy hiaraka aminy.
Sary | Travel + fialam-boly
Ahoana ny fomba hahatonga ny dia hahafinaritra kokoa?
Mba hampialana voly ny ankizy, indrindra amin'ny dia lavitra dia ilaina ny mitondra kilalao, boky, takelaka na pensilihazo ary taratasy. Hanampy azy ireo hiala amin'ny dia lavitra ho avy io.
Inona no entina hampiononana anao?
Raha azo atao ondana sy lamba firakotra ka afaka matory am-pilaminana izy ireo ary manao akanjo milay. Raha ny zazakely dia ilaina ihany koa ny «popolo», fanoloana akanjo sy tavoahangy ary pasifitra.
Ahoana no hikarakarana ny sakafonao mandritra ny sidina?
Raha ny mahazatra dia matetika ny zotram-pitaterana dia misy menio ho an'ny ankizy hamahanana ny ankizy kely, na dia fohy aza ny dia dia azo entina ao anaty valizy ny sakafon'ny zaza.
Ireo zaza dia mora tohina amin'ny tsy fahampian-drano, noho izany dia tokony hisotro ranon-javatra izy ireo alohan'ny sy mandritra ny sidina, indrindra ny sidina lavitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » fiaramanidina » Torolàlana haingana hanidina miaraka amin'ny ankizy amin'izay toerana aleha